Budada NMN - Soo saaraha Warshad Soo saare
/ Products / Nootropics budada / β-Nicotinamide Mononucleotide
AASraw waxay leedahay aqoonsi si ay u keento badeecadaha ka hortagga gabowga-NMN Powder in badan oo leh nidaaminta CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo. Celceliskeena waxsoosaarka billaha ah wuxuu gaari karaa 1500kg. Ku soo dhowow nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad iibsi oo dheeraad ah:
Qaybaha Xirmooyinka: 1kg / bac, 25kg / durbaan
Miisaanka Nooca 334.22
Isku mid ahaanshaha NMN;
Kaydinta iyo Isticmaalka 2-8 ° C meel qalalan
Furaha Muhiimka ah:
AD NAD + waa coenzyme muhiim u ah nolosha iyo shaqooyinka gacanta.
Heerarka NAD +, gaar ahaan qaabkeeda 'NAD +', si dabiici ah ayey hoos ugu dhacdaa da'da unugyo badan.
♣ Jidhku wuxuu u abuuraa NMN inuu yahay tallaabo dhexdhexaad ah ama "hore u-socod" u ah NAD +. Si fudud u dhig: heerarka NMN ee sareeya waxay ka dhigan yihiin heerarka NAD + sare.
Ogaysiis: Maqaallada soo socda, Waxaa loo adeegsaday NMN halkii laga isticmaali lahaa β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nikotinamide Mononucleotide: Faa'iidooyinka iyo Isticmaalka
Gabowga waa geedi socod dabiici ah oo wax u dhimi kara caafimaadkaaga jirka, maskaxda, iyo qurxinta. Calaamadaha ugu horreeya ee gabowga waxay ka muuqdaan gobolka wejiga iyo qoorta iyagoo u eegaya xariiqyo wanaagsan iyo laalaab. Saamaynta qurxinta ee gabowga waxaa badanaa sii buunbuuniya arrimo dibedda ah sida soo -gaadhista UV taasoo keenta maqaarka sawir -qaadista oo ay weheliso walaac, walaac, iyo wasakheynta deegaanka ee xira daloolada taasoo keenta xanaaq joogto ah iyo finan.
Laalaabkan ayaa ah calaamadda qurxinta iyo muuqaalka kore ee gabowga laakiin gudaha, waxay saamayn ku yeelan karaan kartidaada inaad ku qabato hawlaha nolol maalmeedka xamaasad iyo tamar la mid ah tii hore. Waxaa intaa dheer, gabowgu wuxuu saameyn ku yeelan karaa culeyskaaga iyo dheef -shiid kiimikaad, inta badan wuxuu keenaa koror culeys caafimaad darro ah oo la xiriira heerka dheef -shiid kiimikaadka asaasiga ah.
Isbeddelada la xiriira gabowga lama iska ilaalin karo inta badan sababta oo ah qaar ka mid ah waxay ka dhasheen dheef -shiid kiimikaadka mitokondrial oo yaraaday iyo isbeddelka muujinta hidda. Inta badan isbeddelada jir ahaaneed ee ku dhaca gabowga waxay ka dhashaan hoos u dhaca heerarka NAD+, coenzyme muhiim u ah homeostasis iyo dheef -shiid kiimikaadka oo laga helo dhammaan noolaha.
Inta lagu guda jiro dhalinyaradeena, coenzyme-kan wuxuu ka qeyb qaataa ku dhawaad ​​dhammaan falcelinta soo-saarka tamar-mitochondrial waxaana si weyn looga helaa jirka. Si kastaba ha noqotee, markaan sii gabowno, heerarka NAD+ waxay bilaabaan inay si weyn hoos ugu dhacaan.
Daawooyinka ka hortagga gabowga si ballaaran ayaa loo dallacsiiyaa oo ay adeegsadaan dadka adduunka oo idil iyagoo rajeynaya inay ka hortagaan saameynta gabowga. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood maahan kuwo wax ku ool ah maadaama badankoodu aysan saameyn ku yeelan heerarka NAD+ ee jirka. Natiijada daraasado dhowr ah. saynisyahannada iyo cilmi -baarayaashu waxay heleen xal lagula dagaallamo astaamaha gabowga, elixir nololeed, oo ah, Nicotinamide Mononucleotide oo isla markiiba ka dib isticmaalka afka loo beddelo NAD+ jirka.
Nicotinamide Mononucleotide waa nucleotide oo laga soo qaatay niacin ama fiitamiin B3 oo sidoo kale laga heli karo, sida, miraha iyo khudaarta qaarkood sida avocados iyo edamame. NMN ayaa dhawaanahan kasbatay inay noqoto kaabis ka hortag ah oo gabow ah, inta badan waxay ka dhalatay daabacaadda buugga, Lifespan, oo uu qoray David Sinclair.
NAD+ ayaa lagu yaqaanay inay tahay astaanta gabowga muddo aad u dheer laakiin la dagaalanka saamaynta gabowga ee heerarkeeda way adkayd. Tani inta badan waa sababta oo ah daraasadihii hore waxay diiradda saareen kordhinta heerarka NAD+ ee jirka iyadoo la adeegsanayo kaabayaasha NAD+. Si kastaba ha noqotee, durbadiiba waxaa la ogaaday in NAD+ ay ku leedahay bioavailability liidh jirka taasoo la micno ah inaysan si fudud u nuugin, oo cunitaankeeda si ka baxsan saameyn kuma yeelan heerarkeeda qotodheer.
Kaalmada NMN waa horudhac xoog leh oo NAD+ oo muhiim u ah hannaanka wax soo saarka tamarta ee jirka aadanaha. Si kastaba ha noqotee, cilmi-baaristii ugu horreysay ee adeegsiga budada NMN ama kaabis ahaan sida ka-hortagga gabowga ka-hortagga ayaa la sameeyay kaliya sannadka 2020. NMN weli waxay leedahay waddo dheer oo ay ku tagto adduunka cilmi-baarista laakiin daraasadaha la sameeyay illaa hadda waxay caddeeyeen faa'iidooyinka mala -awaalka ah iyo saamaynta NMN ee gabowga.
Heerarka NAD+ waxaa lagu kordhin karaa mid ka mid ah labada horudhac ee muhiimka ah, NMN sida kor ku xusan ama NR. NMN iyo NR ayaa isla socda, iyada oo NMN loo beddelay NR oo muhiim u ah nuugista hore ee jirka. NR waxay u taagan tahay Nicotinamide riboside kaas oo si weyn u kordhin kara heerarka NAD+ ee qotodheer. Kordhinta NR si loola dagaallamo saameynta gabowga ayaa si qoto dheer loo baaray iyada oo NR kaabisyada lagu dhawaaqay inay yihiin 'badbaado iyo dulqaad'.
Sidee NMN ugu Shaqaysaa Jirka?
NMN wuxuu kaalin muhiim ah ka qaataa geeddi -socodka soo -saarka tamarta iyo dayactirka DNA -ga ee jirka, in kasta oo si dadban. NMN waxay kor u qaadeysaa isku -darka ama soo -saarka NAD+ ee jirka si looga gudbo yaraanta, iyada oo loo marayo dariiqa badbaadinta. NAD+ waxaa lagu soo koobi karaa in ka badan hal waddo oo dariiqa badbaadintu waxay kuxirantahay sida habboon ee NMN u shaqeyso. Dariiqa Badbaadinta waxaa loola jeedaa waddo soo saarta NAD+ oo leh alaabooyinka dhammaadka NAD+ burburka sida niacinamide ama NAM. NAM waxay si toos ah ugu beddeshaa NMN oo markaa, iyada oo loo marayo tallaabooyin kala duwan, soo saarta NAD+. Tani waa shaqada ugu muhiimsan ee NMN ee jirka waana sababta ugu weyn ee ka dambeysa NMN -ka 'caan -ka -kaca.
Markaad afka ka qaadatid kaabayaasha NMN, waxaa la rumeysan yahay inay jirka u rogaan NR maxaa yeelay xarunta NMN ma awoodo inay ka gudubto xuubka, unugyada. Ka dib markii NR uu galo unugga, waxaa dib loogu celiyaa NMN iyada oo loo marayo saamaynta enzyme gaar ah; nicotinamide ribose kinase ama NRK. NMN -kan ayaa markaa maraya dariiqa badbaadinta biosynthesis -ka NAD+ si loo buuxiyo heerarka dambe ee jirka aadanaha.
Waxaa muhiim ah in halkan lagu xuso in buuxinta NAD+ iyada oo loo marayo kaabista NMN kaliya aysan keenin tamar korodhay laakiin sidoo kale ay leedahay dhowr faa'iidooyin caafimaad oo kale kuwaas oo kaliya ku dara rafcaanka kaabista NMN.
Faa'iidooyinka Caafimaadka NMN
Guryaha ka hortagga gabowga ee NMN ma aha oo kaliya natiijada korodhka heerarka NAD+ laakiin sidoo kale waa natiijada dariiqyada iyo shaqooyinka NMN ee jidhka bini'aadamka. Faa'iidada ugu weyn ee NMN wali waa awooda ay u leedahay inay kordhiso tamarta gacanta iyo jirka maadaama ay tahay kor u qaadida NAD+ si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka kale waa in aan la iska indha tirin gaar ahaan haddii aad fiirineyso haddii kaabista NMN ay adiga kuu tahay doorashada saxda ah.
Ahaanshaha kor u qaadista NAD+ wuxuu u oggolaanayaa NMN inay soo saarto dhowr faa'iidooyin caafimaad oo kale, sida:
· Maaraynta Cayilka
Dhacdooyinka buurnaanta ayaa si aad ah u kordhay tan iyo 30 sano ka hor, iyadoo boqolkiiba buurnaanta carruurnimadu ay ku dhowaad labanlaabantay 30 -kan sano. Tani waxay si gaar ah uga welwelsan tahay sababta oo ah cayilku wuxuu kuu horseedaa dhowr cudur oo kale oo sababi kara dhimasho. Heerka dheef-shiid kiimikaad hooseeya ayaa ah sababta ugu weyn ee ka dambaysa cayilka da'da la xiriira ee inta badan lagu arko shakhsiyaadka gaboobay. Xakamaynta cayilnaanta noocan ah waxay u baahan tahay hab dhinacyo badan leh oo bartilmaameedsada hormoonnada gaajada oo ay weheliso heerarka dheef -shiid kiimikaadka. Daraasad lagu sameeyay Qatar ayaa lagu ogaaday in kaabista NMN ee moodooyinka xayawaanka ay dhalisay kororka muujinta hidda -wadaha ee laba hormoonno oo muhiim u ah xakamaynta rabitaanka cuntada iyo hubinta dheef -shiid kiimikaadka; leptin iyo sirtuin, siday u kala horreeyaan. Daraasadani waxay muujineysaa in cunista afka ee NMN ay xakamayn karto gaajada si ay kaaga caawiso inaad lumiso miisaanka iyadoo sidoo kale kordhineysa heerka dheef -shiid kiimikaadka, oo labaduba buunbuunin miisaanka oo aad la kulmi karto.
Intaa waxaa sii dheer, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in NMN ay kordhiso heerarka NAD+ kaas oo unugyada dufanka leh ay leeyihiin saameyn dheef-shiid kiimikaad ah, oo sii caawisa miisaanka oo yaraada.
· Xakameynta Sonkorowga
Sonkorowgu waa mid ka mid ah dhibaatooyinka buurnida iyo adeegsiga kaabayaasha NMN si loo maareeyo loona daweeyo cayilka ayaa ka hortagi kara sonkorowga inuu kobco. Laakiin taasi maahan saamaynta kaliya ee NMN ku leedahay heerarka sonkorta dhiigga. Heerarka NAD+ oo yaraaday ayaa la ogaaday inay la xiriirto hoos u dhaca shaqeynta unugyada beta ee beeryarada, isha ugu weyn ee insuliinta ee jirka. Cilmi -baadhayaashu waxay rumaysan yihiin in tani ay tahay sababta ugu weyn ee ka dambaysa horumarinta sonkorowga nooca 2 ee dadka waaweyn.
Daraasad lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka ayaa muujisay in sonkorowga iyo jiirarka da'da ah, markii la siiyay kaabayaasha NMN, ay hagaajiyeen shaqada beta-unug maadaama ay buuxinayaan dukaamada NAD+ ee jirka. Daraasad kale ayaa diiradda saareysay sidii loo heli lahaa bartilmaameed daaweyn oo loogu talagalay da'da la xiriirta iyo buurnaanta la xiriirta nooca sonkorowga mellitus nooca 2 waxay ogaatay in kaabayaasha NMN ay awood u leeyihiin inay saameeyaan beerka oo ay kordhiyaan oksaydhka dufanka. Waxay kaloo yareyn karaan kaydinta dufanka ee jirka halka ay sidoo kale kor u qaadayaan dulqaadka gulukooska ee jirka.
Kaabayaasha NMN waxay leeyihiin waddooyin dhowr ah oo ay ka caawiyaan hagaajinta dulqaadka gulukooska iyo iska caabbinta insulinta, sidaasna waxay gacan uga geysaneysaa maareynta nooca sonkorowga mellitus nooca 2 ee shakhsiyaadka gaboobay. Waddooyin la mid ah ayaa loo isticmaalaa si wax ku ool ah loo yareeyo astaamaha cudurada dheef -shiid kiimikaadka kale ee soo baxa inta lagu jiro geedi socodka gabowga.
· Waxqabadka Kordhay Nidaamka Difaaca
Marka la eego kaabista NMN oo dhowaan uun noqotay ikhtiyaar wax ku ool ah oo la baaray, ugu yaraan moodooyinka xayawaanka, la yaab ma laha in doorka NMN la darsay marka laga hadlayo caabuqa COVID-19.
Intii la baranayay doorarka kala duwan ee coenzyme -ka badan, NAD+, cilmi -baarayaashu waxay ogaadeen inay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaarto habsami u shaqaynta nidaamka difaaca. Faafida cusub ee COVID-19 waxay ku riixday cilmi-baarayaashu inay bartaan xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya kaabayaasha NMN, kordhinta NAD+, iyo kor u qaadista shaqada difaaca si looga hortago saameynta fayraska.
Mid ka mid ah daraasaddan oo kale ayaa lagu ogaaday in hoos u dhac ku yimid heerarka NAD+ kadibna, da'da oo korortay, taasoo dhalisay qaabab daran oo caabuq ah. Waxa kale oo la ogaaday in bukaannadani ay halis sare ugu jiraan cudurrada iyo dhimashada ka dhasha caabuqa COVID-19. Natiijooyinkaas awgood, waxaa la qiyaasi karaa in kaalmada NMN ay awood u yeelan karto inay yareyso darnaanta COVID-19 uu u saameeyo nidaamka difaaca iyo jirka aadanaha.
· Dhalmada Dumarka oo La Hagaajiyay
Dumarka waxaa saameeya saacadda bayoolojiga oo xaddidaya awooddooda tarannimo ee da 'ahaan. Daraasado kala duwan oo lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka dheddigga ah ayaa lagu ogaaday in kaabista NMN ay awood u yeelan karto inay yareyso xadkaas oo xitaa ay daweyso madhalaysnimada la xiriirta da'da xaaladaha qaarkood.
Daraasad lagu sameeyay jiirka dabiiciga ah, jiirarka dheddigga ayaa lagu ogaaday in hoos u dhaca heerarka NAD+ ay sababi karto hoos u dhaca tayada oocyte oo ay weheliso hoos u dhac weyn oo ku dhaca tirooyinka oocyte, taas oo aakhirka yareynaysa awoodda taranka iyo bacriminta. Dib -u -soo -celinta heerarka NAD+ ee moodooyinkan xayawaanka ah ee leh kaalmada NMN ayaa la ogaaday inay kordhisay tayada oocyte iyo tirooyinkeeda, sidaa darteedna ay wanaajineyso awoodda taranka.
Daraasad kale ayaa la sameeyay si loo qiimeeyo dhab ahaan waxa yareeya tayada oocytes oo da 'ah. Daraasaddan, oocytes oo ka timid dumarka waaweyn ayaa la soo ururiyey oo la bartay, si qoto dheer si loo fahmo cudurka nafleyda. Cilmi -baadhayaashu waxay ogaadeen in tayada oocyte oo hoos u dhacday ay ka dhalatay is -beddellada dhibcaha ee DNA -da mitokondrial ee oocyte, taas oo ka dhalata dheelitir la'aanta heerarka NAD+. Tani waa sababta kaalmada NMN ee lagu kordhinayo heerarka NAD+ la rumeysan yahay inay wanaajineyso bacriminta iyo caafimaadka taranka, gaar ahaan dumarka da'da ah.
Maaddaama haweenka da'da ahi ay waayaan inta badan awooddooda taranka inta lagu jiro caadada, kaabayaasha NMN, oo ay weheliso inay awoodaan inay hagaajiyaan caafimaadka taranka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay awoodaan inay beddelaan menopause, illaa xad. Tani waxay u oggolaan doontaa haweenka inay dhalaan muddo dheer oo ay yeeshaan tayo sare oocytes oo xitaa marka ay ka gudbaan xadka da'da guud.
· Socodka Dhiigga oo Kordhay
Sida laga soo xigtay cilmi -baaris uu sameeyay Dr. DAvid Sinclair, bayoolaji -yaqaanka mas'uul ka ah sumcadda kaabayaasha NMN, markaan sii gabowno, unugyada endothelial -ka ee dahaara xididdada dhiigga ayaa hoos u dhacaya tirada iyo tayada. Tani waxay markaa saamaynaysaa nafaqooyinka ka soo gudbaya dhiigga una gudbaya unugyada ay maraakiibtu maraan, taas oo saamaynaysa tayada guud ee xididka dhiigga. Isbeddelladaan ayaa la rumeysan yahay inay yihiin qodobka ugu weyn ee ka dambeeya dhacdooyinka sii kordhaya ee cudurrada xididdada dhiigga ee dadka da'da ah.
Kordhinta NMN ama kaalmada NR waxay kordhisaa heerarka NAD+ oo kordhay, taas oo sida ku cad daraasaddan keenta unugyada endothelial inay noqdaan kuwo firfircoon oo awood leh si ay u soo saaraan xididdada dhiigga cusub marka kuwa hore ay joojiyaan inay si habboon u shaqeeyaan.
· Waxqabadka Garashada oo la xoojiyay
Xanuunada neerfayaasha waa xanuuno caadi ah oo saameeya maskaxda, hoos u dhaca shaqada garashada iyo tayada nolosha. Kordhinta NMN si loo kordhiyo heerarka NAD+ ayaa la rumeysan yahay inay aad waxtar ugu leedahay hagaajinta shaqada garashada iyo kor u qaadista badbaadada unugyada maskaxda.
Daraasad halkaas oo moodooyinka xayawaanka ee qaba dhaawac maskaxeed iyo neurodegeneration la siiyay xarun gaar ah, P7C3-A20, waxaa la ogaaday in xaruntaani ay hagaajisay shaqada garashada oo joojisay hababka neerfayaasha.
P7C3-A20 waa xarun soo saarta NMN oo markaa soo saarta NAD+. Ku siinta jiirarka TBI xaruntan waxaa lagu ogaaday inaysan ahayn oo kaliya faa'iidooyin garasho laakiin sidoo kale waxaa la ogaaday inay kordhineyso daacadnimada shaqeynta iyo qaab dhismeedka xannibaadda maskaxda-dhiigga, maadaama xaruntaani ay tahay qayb ka mid ah xuubka.
· Shaqada Muruqa oo hagaagtay iyo Adkaysi kordhay
Ciyaartoyda jeclaan lahayd inay hagaajiyaan kartida dulqaadkooda waa inay qaataan kaabayaasha NMN maadaama dhowaan la ogaaday in kaabayaashan ay awood u leeyihiin inay hagaajiyaan awooddooda aerobic. Faa'iidadan dheellitirka NMN badanaa waxay ugu wacan tahay saamaynta wax -soo -saarka tamarta ee NAD+ muruqa, laakiin waxaa muhiim ah in la xuso in ciyaartoydan ay sidoo kale la kulmaan koror aad u weyn heerarka muruqyada muruqyada.
Miyaan qaataa NMN Powder?
Budada NMN waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo si faahfaahsan loo baaray, qaababka xoolaha iyo shaybaarka. Qaar ka mid ah faa'iidooyinkaas ayaa lagu baaray aadanaha, waxayna soo saareen natiijooyin wax ku ool ah. Haddii aad bilowdo inaad aragto calaamadaha gabowga haddii ay tahay qaab dulqaadkii oo yaraaday, kartida isboortiga, ama calaamadaha qurxinta, waxaa laga yaabaa inaad ka faa'iideysato qaadashada kaabayaasha NMN. Isticmaalkooda ayaa si gaar ah loogu talinayaa kuwa isku dayaya inay ka noqdaan astaamaha gabowga.
NMN Halista iman karta
NMN waa unug dabiici ah oo laga helo jirka bini'aadamka, ka dib markii baaritaan dheer iyo falanqeyn la ogaaday inaysan lahayn wax khatar ah ama dhibaatooyin la xiriira. NMN, marka ay si sax ah u soo saarto alaab -qeybiyaha NMN oo si habboon loogu kaydiyo warshadda budada NMN iyo gurigaaga, gabi ahaanba waa u badbaado isticmaalka aadanaha. Kaydinta budada NMN waa muhiim maxaa yeelay haddii lagu kaydiyo meel kulul, waxay isu beddeli doontaa niacinamide waxayna bilaabi doontaa inay si tartiib ah u sumeyso jirkaaga markaad cunayso.
Uma baahnid inaad ka walwasho sida budada NMN ee saafiga ah ee shirkadda NMN ay had iyo jeer si habboon ugu kaydiso, meel qabow oo qalalan. Waxaa intaa dheer, soo -saareyaasha budada NMN waxay sidoo kale ku daabacaan tilmaamaha saxda ah ee isticmaalka iyo kaydinta baakadaha kaabayaasha si aad u ogaato sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo, iyada oo aan keenin dhibaatooyin daran.
Waxaa sidoo kale xusid mudan in isticmaalka joogtada ah ee kaabayaasha NMN ay sababi karto hoos u dhac ku yimaadda kaabayaasha si loo soo saaro saamaynta la rabo. Sababtaas awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad ka nasato dheellitirka marka aad bilowdo inaad ogaato faa'iidooyinka NMN ee hoos u dhacay sida tayada hurdada oo yaraatay iyo dhacdooyinka caabuqyada oo kordhay.
Ilaa iyo inta daryeel habboon la qaadanayo inta lagu guda jiro geeddi -socodka wax -soo -saarka iyo kaydinta, guriga iyo warshadda labadaba, ma jiraan khataro iyo waxyeellooyin la xiriira isticmaalka NMN.
Xagee laga Iibsadaa Budada NMN ee ugu Fiican?
Waxaad ka iibsan kartaa budada NMN iyo qaababka kale ee kaabayaasha NMN farmashiyeyaasha internetka, dukaamada caafimaadka, iyo kuwa dhiggooda ah. Waxa kale oo aad iibsan kartaa bacaha budada ah ee NMN oo ay ku jiraan xaddi aad u badan oo budada NMN ah, in kasta oo ay tahay heerka warshadaha oo inta badan ay iibsadaan shirkado waaweyn oo isku dayaya inay soo saaraan kaniiniyada NMN iyo kaabsoosha.
Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa budada NMN Amazon ama Amazon Prime, laakiin waa inaad ka taxaddartaa inaad ka iibsato alaabta dhabta ah iibiyeyaasha la xaqiijiyay maadaama iibiyayaal badan oo aan kala sooc lahayn ay kugu khiyaanayn karaan inaad ku bixiso lacag aad u badan dupe ama been abuur, taas oo aan wax saameyn ah ku yeelan caafimaadkaaga ama saamayn taban ku leh caafimaadkaaga.
Kahor intaadan bilaabin wax iibsiga budada NMN, waa inaad hubisaa dhowr arrimood si aad u hubiso inaad adiga u iibsaneyso badeecada ugu fiican.
Kaalmada NMN ee ugu fiican waa tan lagu soo saaray dhammaan tilmaamaha amniga iyo hab -maamuusyada jira. Alaab -qeybiyeyaasha NMN waa inay hubiyaan in tixgelinta ugu weyn la siiyo si looga hortago faddaraynta budada NMN oo leh wax kasta oo sun ah ama wasakheyn ah oo u keeni kara dhib ka badan inta u wanaagsan jirka aadanaha.
Waxaa intaa dheer, budada NMN waa inay noqotaa, sida kor ku xusan, waa in lagu kaydiyaa xaalado ku habboon oo sidoo kale la ilaalin doono inta lagu guda jiro gaadiidka kaabayaasha.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan NMN Powder
· Budada NMN ma beddeli kartaa gabowga?
Budada NMN waxaa lagu xayeysiiyaa inay tahay ka-hortagga gabowga oo si sax ah, maadaama ay kordhineyso heerarka NAD+ oo kaalin muhiim ah ka qaata yareynta heerarka tamartaada markaad gabowdo. Intaas oo keliya maahan, budada NMN waxay dib u celin kartaa saameynta gabowga ee nidaamyada xubnaha jirka ee kala duwan, waxayna dib kuugu celin doontaa dhallintaada, maalmaha tamarta badan.
· Ma budada NMN ayaa Ammaan ah?
Budada NMN ayaa si fiican loo baaray si loo qiimeeyo shaqooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee isticmaalkiisu ku yeelan karo jirka bini'aadamka. Intii lagu jiray daraasaddan, waxyeellooyinka ka imaan kara ayaa sidoo kale lagu falanqeeyay oo keliya natiijooyinka si loo muujiyo in adeegsiga NMN aysan lahayn waxyeello dhinacyo ah oo la xiriirta. Dhibaato kasta oo ka dhalan karta isticmaalka budada NMN waa natiijo ka timid qalad bini'aadan ama wadaad oo la sameeyay intii lagu guda jiray gaadiidka ama kaydinta. Midkoodna wax shaqo ah kuma laha maaddada dhabta ah ee ka-hortagga gabowga.
· Waa imisa qiimaha budada NMN?
Budada NMN waa diyaarin la heli karo oo aad qaali u ah laakiin waxaa loo tixgeliyaa inay mudan tahay, marka la eego liiskeeda weyn ee faa'iidooyinka cilmi ahaan la xaqiijiyay. Qiimaha sare ee budada NMN kuma xirna liiska dheer ee faa'iidooyinka laakiin waa natiijada geedi -socodka wax -soo -saarka aadka u ballaaran oo laftiisa aad qaali ugu ah inta badan soo -saareyaasha NMN. Marka la eego dabeecadda qaaliga ah ee kaabista, waa inaad had iyo jeer hubisaa inaad ka iibsanayso badeecadda dhabta ah iibiyeyaasha la xaqiijiyay, gaar ahaan haddii aad internetka ku iibsaneyso NMN.
Kaabayaasha NMN ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii caan noqonaya, waxaa mahad iska leh shaqada bayoolaji David Sinclair oo isaguna ku qaatay qayb weyn oo ka mid ah cilmi-baaris xirfadeed tacliimeed iyo barashada saamaynta fitamiin B3 nucleotide-kaan laga helay.
NMN waa horudhaca NAD+ kaas oo ah coenzyme lagama maarmaan u ah habsami u socodka dhowr dheef -shiid kiimikaad, difaac, iyo hoormoonnada. Shaqada ugu weyn ee NAD+ waa doorka ay ka ciyaarto geedi -socodka soo -saarka tamarta. Maaddaama NAD+ ay muhiim u tahay soo -saarka tamarta, hoos -u -dhaca jir ahaaneed ee heerarkeeda maadaama hal da 'ay sababto hoos u dhac ku yimaad heerarka tamarta. Kordhinta NMN waxay gacan ka geysan kartaa kordhinta tamarta iyadoo kor u qaadeysa heerarka NAD+ ee jirka.
NMN sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin kale oo dhowr ah sida hagaajinta shaqada dheef -shiid kiimikaadka, kor u qaadista wadnaha, garashada, wareegga dhiigga, iyo howlaha nidaamka difaaca. Shaqooyinkan waxaa taageera caddayn saynis iyo xog, taas oo ku baaqaysa adeegsiga baahsan ee kaabista NMN ee shakhsiyaadka da'da ah si looga caawiyo inay waqtiga dib ugu laabtaan maalmahooda dhallinta yar.
Marka laga reebo faa'iidooyinka dhowr ah ee NMN, caannimadeeda ayaa sidoo kale lagu qaddarin karaa xaqiiqda ah inaysan lahayn wax khatar ah ama dhibaatooyin la xiriira isticmaalkeeda. Haddii aad dareento in da'daadu ay kula soo xiriirto oo aad jeclaan lahayd inaad ka cabto isha dhallinta, kaabayaasha NMN ayaa noqon kara doorashadaada ugu fiican.
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC, iyo al. (Maajo 2018). "+ Diid" Dheef-shiid kiimikaad. 27 (5): 1081–1095.e10. doi: 10.1016 / j.cmet.2018.03.016. PMC 5935140. PMID 29719225.
 Cambronne XA, Kraus WL (Oktoobar 2020). "+ Isku-xidhka iyo Waxqabadka ee Unugyada Mammalian". Isbeddellada sayniska kiimikada. 45 (10): 858-873. doi: 10.1016 / j.tibs.2020.05.010. PMC 7502477. PMID 32595066.
 Bogan KL, Brenner C (2008). "Nicotinic acid, nicotinamide, iyo nicotinamide riboside: qiimeyn molikal ah oo ah NAD + fiitamiinnada horudhaca ah ee nafaqada aadanaha". Dib-u-eegista Sanadlaha ee Nafaqada. 28: 115-30. doi: 10.1146 / annurev.nutr.28.061807.155443. PMID 18429699.
 Yue Yang, Anthony A. Sauve. NAD + dheef-shiid kiimikaad: Bioenergetics, calaamado iyo khalkhalgelinta daaweynta. Biochim Biophys Acta, 2016; DOI: 10.1016 / j.bbapap.2016.06.014.
 Mills KF, Yoshida S, Stein LR, Grozio A, Kubota S, Sasaki Y, Redpath P, Migaud ME, Apte RS, Uchida K, Yoshino J, Imai SI. Maamulka Muddada-Dheer ee Nicotinamide Mononucleotide Mitigates Hoos u Dhaca Jirka Jirka ee Dhimirka. Qalabka Metab, 2016; DOI: 10.1016 / j.cmet.2016.09.013.
 Niels J. Connell, Riekelt H. Houtkooper, Patrick Schrauwen. NAD + dheef-shiid kiimikaad bartilmaameed u ah caafimaadka dheef-shiid kiimikaad: ma helnay xabaddii lacagta? Diabetologia, 2019; DOI: 10.1007 / s00125-019-4831-3.
 Ann Katrin-Hopp, Patrick Grüter, Michael O. Hottiger. Xeerka Isukeenista Gulukooska ee NAD + iyo ADP-Ribosylation. Unugyada, 2019; DOI: 10.3390 / unugyada 8080890.
 Shuang Zhou, Xiaoqiang Tang, Hou-Zao Chen. Sirtuins iyo Cadaadiska Insulin. Front Endocrinol (Lausanne), 2018; DOI: 10.3389 / fendo.2018.00748.